Boston – बाह्रथरी कुरा
सम्पादक यिनी आफूलाई विशेषज्ञ नै ठान्छन्, त्यसैले हाम्रो टीमले यिनलाई सम्पादकको भूमिका सुम्पेको छ। आलोचनामा पनि भद्रता हुनुपर्छ भनेर यिनी वकालत गर्छन् र टिप्पणिकारहरुका कडा शब्दलाई नरम बनाएर आलोचनालाई कहिलेकाहीं प्रशंसा बनाइदिन्छन्। यिनीसँग पत्रकारिताको लामो अनुभव पनि छ रे भन्छन् तर बजारमा खासै नाम देखिएको छैन।
नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल वेबसाईटहरुमा मध्ये ट्वीटर जबदेखि चर्चामा आयो, यिनका नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई शुरुवातदेखि नै असहिष्णु, छुच्चा, असभ्य, हुँडार, ट्रोल भनियो । जबदेखि केही ‘ठूला राजनीतिज्ञ’हरु सामाजिक सञ्जालमा जोडिए र उनीहरुका ट्विट वा फेसबुक स्टाटस मुलधारे पत्रिकाका समाचार बन्न थाले त्यसपछि नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु ह्वात्तै बढे। ट्विटरको सेरोफेरोमा नेपाली ब्रोडसिट दैनिकहरुले यसको बारेमा लेख्न थालेपछि यसका प्रयोगकर्ताहरु क्रमश: बढ्न थालेको देखिन्छ। अझ बाबुराम भट्टराई ट्वीटरमा रहेको समाचार छापिएपछि ह्वात्तै ठुलो मात्रामा नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले ट्वीटर खाता खोलेको देखिन्छ । त्यसमाथि टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले ‘ट्विटर जिरो’ शुरु गरेपछि त अर्को फड्को नै मार्‍यो।
विश्वभरी नै नयाँ मिडियाको बिस्तारसँगै पत्रिकामा आफ्ना विचार र भनाइ लाद्नेहरुमाथि त यसले धावा नै बोल्यो। सूचनाको व्यापकता, शक्तिमा बसेकाहरुलाई प्रश्न गर्नेदेखि पदमा बसेकाहरुको जवाफदेहिता यही प्लेटफर्ममार्फत जवाफ खोज्न थालियो। यसले जो जो आफूलाई विचार निर्माणका अगुवा ठान्थे, तिनीहरुमाथिको एकाधिकार सामाजिक सञ्जालले खोस्यो। हरेक मान्छे बोल्न थाले, आफ्ना विचार व्यक्त गर्न थाले। जवाफदेहिता खोज्न थाले। त्यसले पहिलेदेखि नै उपल्लो तहमा रहेकाहरुलाई छटपटिमा पार्‍यो।
Continue Reading “के सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न सोध्नु नै छुच्चो हुनु हो?” →
July 30, 2019 By Boston प्रविधि, बाह्र सत्ताईस कुरा, सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरOne Comment
जदौ टक्र्याएँ है पाठकहरु। यो १२ थरीले आफ्नो पहिलाको फ्लेबर नै बिर्सियो भन्ने गुनासो धेरै देखेपछि १२ थरी सम्पादक टीममा गहन छलफल भएको छ। यो छलफलबाट निस्केको निष्कर्ष अनुसार यो नयाँ लेख लेखिएको हो। यसमा तपाइँहरुले आफुलाई कतै भेट्नुभयो भने म म भन्दै आफैलाई ट्याग गर्नुहोला, नत्र टोल छिमेकमा आफुले चिनेका कोही मुतुवा भए उनीहरूलाई तँ तँ भन्दै ट्याग गर्नुहोला। हुनत अहिले डाइपर पुस्ता पनि आइसकेको छ, त्यसैले कतिलाई यो कथा गफजस्तो पनि लाग्ला। अझ शहरियाहरुका लागि त यो लेख लेख्ने असभ्य नै लाग्ला। तर गाउँमा हुर्केका धेरैका लागि यो आफ्नै कथा हो। ल आउनुस् अब सुनौं ओच्छयान मुतुवाको आत्मकथा।
Continue Reading “ओच्छयान मुतुवाको आत्मकथा” →
July 25, 2019 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, मनोरञ्जन, समाज3 Comments
Continue Reading “फिल्मकर्मी भर्सेस मिम नेपाल” →
June 12, 2019 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा चलचित्र, पत्रकार, प्रनेश, युट्युबOne Comment
Continue Reading “नेपालमा #MeToo: सुझ्नु न बुझ्नु, तुलिगाँडा पुज्नु” →
November 5, 2018 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा #MeToo #movement
श्रीमानको थर लिनेलाई ‘दासी’ देख्ने ‘हिप्पोक्रेट’ हरु !
‘बिहेपछि श्रीमानको थर राख्ने महिला ‘दासी’ हुन्।’ आइतबार सामाजिक सन्जाल ट्विटर र फेसबुकमा एउटा यस्तो महानवाणी प्रसारित भयो। यो भनाइमा अनेकन प्रतिक्रिया आए र सबैजसोले ‘लेखक’लाई सकेजति गाली बके। यो बहशका पक्ष विपक्षमा खासै दमदार तर्क आएनन् तर बहश जारी नै रह्यो। हुनत १२ थरीले यो बिषयमा कलम नचलाएको भए पनि हुन्थ्यो तर १२ थरीको उदेश्य नै १२ सत्ताइस कुरा गर्नेहरुका बंगारामा ताक्नु भएकोले चुप लाग्ने कुरै भएन। बहश अलि सेलाएपछि कलम चलेकोमा क्षमा।
देखे/भोगेकै कुरा हो: केही मान्छेहरु सोसल प्लेटफर्ममा मेरा वरिपरी रहेर बहश होस्, बहशको केन्द्रमा म रहुँ भन्ने रोगबाट ग्रसित छन्। सायद अंग्रेजीमा यसलाई ‘नार्सिसिस्ट’ भन्छन् क्यार। यो रोग यति डरलाग्दो हुन्छ कि यसले त्यो नार्सिस्ट व्यक्ति कति पाखण्डी (हिप्पोक्रेट) छ भन्ने पनि छर्लङ्गै देखाइदिन्छ। ‘दासी’ उपमालाई हामी पाखण्डपनको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौं। किन? यसबारेमा नै १२ थरीको यो लेख केन्द्रित रहने छ।
Continue Reading “श्रीमानको थर लिनेलाई ‘दासी’ देख्ने ‘हिप्पोक्रेट’ हरु !” →
April 23, 2018 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज, सामाजिक सञ्जाल
कहिलेकाहीं १२ थरी हरायो भन्ने गुनासो सुन्न पाइन्छ। तर १२ थरी हराएको हुँदैन। त्यो समुद्रको बालुवामा मुन्टो गाडेर बस्ने लामालामा खुट्टा भएको चरो हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो १२ थरी। मरेजस्तो लाग्ला तर जिवितै। हामीले पहिल्यै भनेका छौं, १२ थरी व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्न खोजेको ब्लग साइट हैन, न त यो क्लिक बटुलेर विज्ञापन खोज्ने समाचार साइट नै हो। यसमा लेख्नेहरु व्यवसायिक लेखक पनि हैनौं र पत्रकार पनि हैनौं। हामी कहिलेकाहीं महिनौंसम्म समाचार नहेरी, देश, समाजलाई बाल दिएर आफ्नै काममा व्यस्त भइरहेका हुन्छौं। त्यस्तोबेला हामीलाई १२ थरी ब्लग पनि छ है हाम्रो याद समेत हुँदैन। अहिले पनि यस्तै भएको हो। लामो समय हामीबाट कुनै सामाग्री नआएकोमा क्षमा माग्दा पनि हुने हो तर हामी क्षमा माग्दैनौं। किनकी हामी ठूला मान्छे हौं, हामी कसैलाई गन्दैनौं, मान्दैनौं। हामी हुट्टिट्याऊँ हौं, हामीले सगर थामेका छौं। अरु सबै ऐेरे गैरे नत्थु खैरे हुन्। यति भनिसकेपछि पनि यहाँभन्दा अगाडि बढेर पढ्नु भयो भने लप यु डियर ! Continue Reading “ओल्बाको अंग्रेजी फरर, हनुमानलाई बास्ना हरर” →
April 8, 2018 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती भारत भ्रमण, राजनीति, रेल
लौ , अब फूलपाति लिनुस्। Continue Reading “हनुमाने, अनुमाने र जजमाने पत्रकार” →
December 25, 2017 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज कनसुत्ले हनुमान, पत्रकार, पत्रकारिता
यतिबेला रानीपोखरीको पुनर्निर्माणलाई लिएर ठुलो बहश छेडिएको छ काठमाडौं खाल्डोमा। सिमेन्टको प्रयोग गरेर रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्नु मौलिक संस्कृतिमाथि धावाको हो भनि दाबी गरिरहेका छन् केही मान्छेहरु। उता काठमाडौंका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य भने रानीपोखरीलाई आधुनिक पोखरी बनाएर कफी बेच्ने योजना सुनाइरहनुभको छ। यस्तोमा १२ थरीजस्तो जिम्मेवार हावा छेकुवा ब्लग चुपचाप बस्न सुहाउने कुरै भएन। त्यसैले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्बन्धमा हाम्रो धारणा र योजना के छ भन्नेबारे हामी आज स्पष्ट पार्न चाहान्छौं। अत: आदरणीय पाठकवृन्दलाई कार्यक्रम शुरु गर्नुअघि आआफ्नो स्थानमा सीट बेल्ट वा कम्बर बेल्ट बाँधेर आसनग्रहण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं। Continue Reading “बिद्यानास्… यसरी सुन्दर हुनेछ रानीपोखरी” →
December 24, 2017 By Boston प्रविधि, बाह्र सत्ताईस कुरा, मनोरञ्जन उपमेयर, काठमान्ड, बिध्यासुन्दर, मेयर, रानीपोखरी5 Comments
Continue Reading “बुढो रुखको बिलौना” →
December 18, 2017 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती Nepali Congress, कांग्रेस, चुनाव, मनोवाद
Continue Reading “एक नाथे नारीवाद, दुई नाथे नारीवाद” →
July 23, 2017 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज, सामाजिक सञ्जाल blog, controversy, feminismOne Comment